PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2019-01-13 - Uncoma othisha uthishanhloko waseMenzi
Uncoma othisha uthishanhloko waseMenzi
Isolezwe ngeSonto - 2019-01-13 - ABANTU - KHETHA SANGWENI
USASEBENZISA izimfundiso zeqhawe elingasekho uthishomkhulu wesikole esidumile ngokuphasa kakhulu eThekwini, iMenzi High ekwa-N eMlaza. IMenzi eyakhiwa ngo-1967 iphinde yakhipha u-100% ngemiphumela yonyaka odlule. Akungabazeki ukuthi iMenzi isohlwini lwezikole ezenza ukuthi isifundazwe sishayele phezulu ngenxa yemiphumela yaso.
UNksz Muntu Thulisile Ntombela odabuka eLamontville, eThekwini, uthathe isihlalo esishisayo sikaMnuz Felix Mshololo ongasekho oshone ngo-2015.
Uthe enye into ebasiza kakhulu ukusebenza isikhathi esengeziwe nabafundi. Uthe yena ufika ekuseni kakhulu azoqinisekisa ukuthi kusheshe kungenwe, kuphinde kuphunywe ngo-5 kuya ku-6 ntambama. Ngezimpelasonto nangamaholidi usuke ususha umshikashika esikoleni.
Uncome nothisha abasebancane bayizikhwishikhwishi abahlala besebenza.
UNksz Ntombela owuqweqwe lukathisha uqale imfundo yakhe Entuthukweni Primary eLamontville. Usuke khona wadlulela eVungu High eMahlabathini lapho aqede khona umatric wakhe ngo
1981. Udlulele eNdumiso College of Education lapho eqede khona iSecondary Teachers Diploma ngo-1984.
Uqale ukufundisa eMenzi ngo1985 lapho afika wafundisa isiZulu neBiology. Zakhwela izimendlela ngo-1994 ngesikhathi ethola isikhundla seNhloko yeziLimi esikoleni.
Ziphinde zakhwela ngo-2006 eseqokwa kwesokuba yiPhini likathishomkhulu nokuyilapho asebenze khona kakhulu eduze kukaMshololo amtusa ngobuholi obuqotho. UNksz Ntombela uthi empeleni uMshololo wayempheka, ehlala emtshela ukuthi uyena oyothatha izintambo uma engasekho.
Sekungowesithathu unyaka odlule selokhu athatha lesi sikhundla uNksz Ntombela futhi waqhubeka nokushaya into ecokeme njengomufi.
Uchaze uMshololo njengendoda eyayingagcini nje ngokukhuluma kodwa yayikuphila eyayikusho.
“Wayenesibindi esebenza kanzima engasabi ukuthatha izinqumo. Washiya engiqeqeshile nabanye ozakwethu. Ngeke ngiqambe amanga lwangishaya kakhulu uvalo esehambile ngoba ngabona sengathi isikole sizobuyela emuva,” kuchaza uNksz Ntombela onomoya phansi ngisho ekhuluma.
Uveze ukuthi ukuphatha isikole kungumsebenzi onzima odinga isibindi nokuzinikela nokubambisana kwazo zonke izinhlaka ezithintekayo kwezemfundo. Uthe uqhuba inqola enothisha abangu-40 kodwa bamenzela kube lula ngoba banenhlonipho emangalisayo.
“Akuwona umsebenzi kathishomkhulu yedwa ukukhiqiza imiphumela emihle kodwa kudinga nothisha abazimisele. Mina nginenhlanhla ngoba nginothisha abahloniphayo nakuba besebancane. Isigungu esiphethe isikole (SGB) sikhaliphe kakhulu siyasukuma uma sikhala kusona.’’
Uveze nokuthi naye ubengomunye wabantu besifazane ababezitshela ukuthi
Akashadile, akanazo izingane kodwa kunezimbili azikhulisayo asezithatha njengezingane zakhe.
Uhamba ngonyanyavu lweMercedez Benz (anqabile ukuyichaza kabanzi).
Uyilungu lokuqina lenkonzo yaseLuthela.
Uzifela ngokudla kwesintu Useke waya eBirmingham e-England futhi usafisa ukuyobona ubukhazikhazi baseDubai, e-United Arab Emirates.
Uneziqu zeBA azithole e-University of Zululand, BA Honours ayenze eWits.